Buundada Hong Kong-Zhuhai: oo ay sawirradeeda idiin muuqdaan waa buundada ugu weyn oo badda dusheeda marta oo dunida laga dhiso. - BBC News Somali
Buundada Hong Kong-Zhuhai: oo ay sawirradeeda idiin muuqdaan waa buundada ugu weyn oo badda dusheeda marta oo dunida laga dhiso.
Buundada oo billow ilaa dhammaad laba haad leh waxay 20 jibbaar ka dheer tahay buundada San Francisco's Golden Gate.
Buundadu waxay xiriirinaysaa saddex qaybood oo kala go'naa oo kala aha Macau, Hong Kong iyo dhulwaynaha Shiinaha.
Qaar ka mid ah shacabka Hong Kong ayaa waxay sheegayaan inaan buundadan oo baahnayn balse ujeeddada Shiinaha uu u dhisay ay tahay inuu xiriiriyo Hong Kong iyo Mainland.